Translate zatrudnje from Croatian to Burmese - MyMemory
Results for zatrudnje translation from Croatian to Burmese
ena zatrudnje te poruèi Davidu: "Trudna sam!"
ထိုနောက်သူ၏ခင်ပွန်း ဧလိရှဗက်သည် ပဋိသန္ဓေစွဲ၍၊
Tako Boaz uze Rutu i ona posta ena njegova. Uðe on k njoj i Jahve joj dade te ona zatrudnje i rodi sina.
ဗောဇသည် ရုသကိုသိမ်း၍ စုံဘက်လျက်ဆက်ဆံသောအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ရုသ သည်ပဋိသန္ဓေယူ၍ သားယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏။
Jahve pohodi Anu i ona zatrudnje i rodi jo tri sina i dvije kæeri. A mladi je Samuel rastao pred Jahvom.
ထာဝရဘုရားသည် ဟန္နကို အကြည့်အရှုကြွတော်မူသဖြင့်၊ သူသည် ပဋိသန္ဓေယူ၍၊ သားသုံးယောက်၊ သမီးနှစ်ယောက်တို့ကို ဘွားမြင်လေ၏။ သူငယ်ရှမွေလသည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ကြီးပွား သတည်း။
Potom David utjei svoju enu Bat-ebu. Doðe k njoj i lee s njom. Ona zatrudnje i rodi sina komu nadjenu ime Salomon. Jahve ga zamilova
တဖန်ဒါဝိဒ်သည် ခင်ပွန်းဗာသရှေဘကို နှစ်သိမ့်စေသဖြင့်၊ သူ့ထံသို့ဝင်၍ ဆက်ဆံလေ၏။ သူ သည်လည်း သားယောက်ျားကို ဘွားမြင်၍ ရှောလမုန်အမည်ဖြင့် အဘမှည့်လေ၏။
Ana zatrudnje i, kad bi vrijeme, rodi sina koga nazva imenom Samuel, "jer sam ga", reèe, "izmolila od Jahve".
ဟန္နသည် ပဋိသန္ဓေယူ၍ ကာလအချိန်စေ့သောအခါ၊ သားယောက်ျားကို ဘွားမြင်ပြီးလျှင်၊ ထိုသားကို ထာဝရဘုရားထံ၌ ဆုတောင်းသောကြောင့်၊ ရှမွေလအမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။
lufu (English>French)inovacija (Lithuanian>Spanish)kannadiera (Basque>English)folaghe (Italian>Dutch)australie (Danish>Romanian)supercommissario (Italian>German)suçlulardır (Turkish>Thai)klopfendes (German>Dutch)regarding (English>Tagalog)sxtonan (Esperanto>Hungarian)s'appuie (French>Italian)zálogjogosult, zálogkötelezett (Hungarian>English)muslim dialect to filipino dialect (Tagalog>English)hearer (English>Tamil)aap dono ko bahut miss kar rahi hoon (Hindi>English)uses of indoor games (English>Kannada)vegf (Japanese>Spanish)variation (Danish>Vietnamese)organique (German>Dutch)hwz u hindi (English>Hindi)gennemsnitshøsterne (Danish>English)urinegeur (Dutch>Bulgarian)mi piace baciarti (Italian>English)cd burner (English>Japanese)tilsidesatte (Danish>Serbian)